raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra eo anivon’ity orinasa ity. Amin’izao ankatoky ny fety izao indray kosa dia tapa-kevitra ny orinasa fa hampindram-bola ireo izay mpanjifany mila izany mba hanaovan’izy ireo fety sambatra. Manomboka amin’ny 1000 ariary ka hatramin’ny 500.000 ariary moa, raha ny fanazavana, izay vola azo indramina izay amin’ny alalan’ny tolotra “MVola avance”. Ankoatra izay, nomarihin’ny Telma fa mitohy hatrany ny fanamorana ny fifanoloran’ireo mpanjifa vola amin’ny alalan’ity Mvola ity. Ny #111*1# kosa no hakana ny fanazavana fanampiny.